Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo [Sawirka: State media]
ASMARA - Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi [Farmaajo] oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaaladda Asmara ayaa ugu baaqay Qaramadda Midoobay in xariyaadaha laga qaado Eritrea.
Farmaajo ayaa sheegay in si shacabka reer Eritrea ay xaq u leeyihiin inay lamid noqdaan shucuubta kale ee caalamka ku nool, kuwaasoo uu tilmaamay inay yihiin dad is-dhaxgal dhinac walba ah la sameeya dunida inteeda kale.
"Si dadka reer Ereteriya ula fal-galaan shucuubta kale ee caalamka, waxaan ku baaqaynaa in xayiraadaha iyo cunqabaynta saaran laga qaado," ayuu Farmaajo sheegay, isagoo saxaafadda kula hadlayay Magaaladda Asmara.
Eritrea cunaqabeynta iyo xariyaadaha waxaa kusoo rogay Gollaha amaanka ee UN-ka sanadkii 2009-kii, markaasoo lagu eedeeyay inay taageerto kooxaha ka dagaalama Soomaaliya oo ay ugu horeyso Al-Shabaab, inkastoo ay beenisay Asmara.
Waxaa la rumeysan yahay in talaabooyinka lagu go'doomiyay Eritrea ay gadaal ka riixaysay Eithiopia, oo xurguf ay kala dhaxeysay, laakiin xiriirka labadda dal oo soo laabtay bishan ayaa keentay in Abiy Axmed uu ku baaqo in laga qaado xayiraada.
Hadalka Farmaajo ee ah in cunaqabeynta laga qaado Eritrea ayaa loo arkaa inuu yahay ujeedada ugu wayn oo uu Madaxwayne Isaias Afwerki u casuumay Asmara, maadaama isbedal uu ku yimid siyaasada Geeska Afrika.
Inta uu ku guda jiray shirkiisa jaraa'id ayaa Farmaajo arrimaha uu ka hadlay waxaa kamid ah xiriirka diblumaasiyadeed ee dib boorka looga jafay ee Eithiopia iyo Eritrea, wuxuuna tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay si wayn usoo dhawayneyso.
Ugu dambeyn, Madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu dul-maray qodobadda ay kawada hadleen isaga iyo Afwerki, oo uu tilmaamay inay ahaayeen qodobada mirra dhal ah, wuxuuna rajeeyay inay kawada shaqayn doonan isku soo dhawaanshaha labada dal.
Labada Madaxweyne ayaa ku heshiiyay inay dib usoo celiyaan xiriirka diblomaasiyasadeed ee labada wadan, iyagoo dib u furanaya safaaradahooda Muqdisho iyo Asmara.